I-4 yoga ibanga ukunciphisa isisindo | Bezzia
4 i-yoga ibanga ukunciphisa umzimba
UToñy Torres | 10/07/2021 18:00 | Ukuzivocavoca
Ubuwazi ukuthi nge-yoga futhi unganciphisa isisindo? Lokhu kuyinto enzima ukuyibona kulabo abacabanga ukuthi ukwehlisa isisindo somzimba, kufanele uzibulale ejimini. Kuliqiniso okuyingxenye, kepha hhayi ngendlela evame ukuqondwa. Lokho wukuthi, ukunciphisa isisindo, kuyadingeka ukuhlanganisa ukudla okunempilo nokuvivinya umzimba. Kepha ngaphezu kokujuluka, okumele ukwenze ungaguquguquki futhi usebenze kanzima kakhulu ukufeza izinhloso oyifunayo.
Ngokuzivocavoca okunomthelela ophansi njenge-yoga, kungenzeka ukunciphisa umzimba nokuthuthukisa ukuqina komzimba. Lokhu akusho ukuthi kulula, kepha kuyakuvumela ukuthi uzilolonge ngendlela ezolile. I-Yoga inikeza izinzuzo eziningi zezempilo, ngokomoya futhi uma lokho bekunganele, kuyasiza futhi ekunciphiseni isisindo. Ngakho-ke uma ufuna ukuvivinya umzimba ukuze wehlise isisindo, ungaphuthelwa yilezi zimo ze-yoga.
1 Izimo ze-Yoga ezikusiza ukuthi wehle isisindo
1.1 Igeja lokuma noma iHalasana
1.3 Ukuma kwesihlahla
1.4 Ipulangwe pose
2 Ukwehlisa isisindo nge-yoga, indaba yokubekezela nokwenza
Izimo ze-Yoga ezikusiza ukuthi wehle isisindo
Phakathi kokuma okuningi kwe-asanas noma i-yoga ukuma okukhona, ungathola zonke izinhlobo zezincomo zikakhonkolo ukunciphisa ukucindezeleka, ukulwa nokuqwasha, ukuthuthukisa ukuma noma susa ukugcinwa koketshezi, Ngokwesibonelo. Ngendlela efanayo, kukhona ukuma kwe-yoga okusiza ukuthi unciphise isisindo, njengalezo ozothola ngezansi. Uma uzijwayeza njalo, uhlala njalo futhi ulandela ukudla okwanele ngokwezidingo zakho, unganciphisa isisindo ngendlela enempilo.
Igeja lokuma noma iHalasana
Ngalesi sikhundla kusetshenzwa isisu, ngaphezu kwalokho, kunomthelela ekugayeni okungcono, okuthanda ukunciphisa isisindo. Ukuze ukwenze, yima kumata ubuyise imilenze yakho emuva, ukugoqa phezu kwekhanda lakho uze uthinte umhlabathi ngezandla zakho. Lapho ukwazi kahle ukuma, ungathuthukisa ukuvivinya umzimba ngokwelula izingalo zakho emuva, uze uthinte izinzwane zakho ngeminwe yakho.
Lokhu kungenye yama-asanas alula futhi ayisisekelo, aphelele kubo bobabili ochwepheshe nabaqalayo. Yize kubonakala kuyisisekelo, ngale ndlela omi ngayo usebenza i-abs yakho, ikhazimula futhi uqinise umhlane wakho. Qala ukulala ubheke phansi kumata, ibunzi liphumule phansi futhi izandla zelulwe ezingeni lamahlombe. Njengoba uphefumula phakamisa ikhanda, isifuba nesisu sakho, uze ufinyelele esimeni kusuka esithombeni.
Ukuze wenze lokhu kuma kufanele usebenze ekugxileni, ngoba ukulawula ibhalansi kubalulekile. Uma ukwenza kahle, ubamba ukuma imizuzu engu-30 esivivinyweni ngasinye bese usiphinda izikhathi eziningana esimisweni ngasinye, uzobe uzivocavoca i-abs yakho.
Ukuzivocavoca okuphelele kokusebenza i-abs yakho, ongathuthukisa ngayo ukwakheka komzimba wakho kodwa futhi wehlise nesisindo ngempumelelo enkulu. Lala ubheke phansi kumata, izandla zakho ziphakeme emahlombe. Goba izingalo zakho bese uphakamisa umzimba wakho ube sesimeni etafuleni. Ukuze ubambe kahle, kuzofanele uhlale ugxile futhi ucindezele umzimba wakho kahle ukuze ungalahli ukuma kwakho.
Uma uhlala isikhathi eside kulesi sikhundla, uzosebenza kakhulu imisipha yakho. Yize kungelula neze, noma ngabe kungabonakala kangakanani. Qala ngemizuzwana engama-30, phumula uphinde uphinde uze uzizwe usukulungele ukugcina lokhu kuma isikhathi eside.
Ukwehlisa isisindo nge-yoga, indaba yokubekezela nokwenza
I-Yoga ukuvivinya umzimba okuphelele kuzo zonke izinhlobo zabantu, kungakhathalekile ubudala, ubulili noma isimo somzimba. Kungumsebenzi onomthelela ophansi lokho kubandakanya umsebenzi womzimba wonke kodwa ngaphandle kwengozi yokulimala. Ngakolunye uhlangothi, uma nje wenza i-yoga njalo uzobona ukuthi ngaphezu kokwehlisa isisindo nokuthuthukisa isimo sakho somzimba, uzoba nokuma okuhle nokuhlushwa okukhulu.
Ungakhohlwa izinzuzo eziningi zangaphakathi ze-yoga. Phakathi kokunye okuningi, kunciphisa umfutho wegazi, kuthuthukisa imizwa nokucindezeleka, kukusiza ulale kangcono noma ukugaya ukudla kangcono. Njengoba ubona, ukuzivocavoca kokubili ngokomzimba nangokwengqondo, okuzokulethela izinzuzo eziningi futhi lapho unganciphisa khona isisindo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukuzivocavoca » 4 i-yoga ibanga ukunciphisa umzimba
Amathiphu wokuthinta okuvelele ekhaya
Ukuhlobisa kanjani amabhodlela engilazi